က Man v စက်: ကွန်ပျူတာကွတ်နိုင်သလား, ရေးပြီးကြှနျုပျတို့ကိုသန်းသည် သာ. ကောင်း၏ Paint? - သတင်း Rule
က Man v စက်: ကွန်ပျူတာကွတ်နိုင်သလား, ရေးပြီးကြှနျုပျတို့ကိုသန်းသည် သာ. ကောင်း၏ Paint?
အတုထောက်လှမ်းရေးယခုဂိမ်းအနိုင်ရနိုင်, သင်၏မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုရန်, ပင်သင့်ရဲ့ကားရပ်နားလက်မှတ်ဆန့်ကျင်အယူခံ. သို့သော်ထိုသို့ပင်လူသားမြားသစားမှုရှာတွေ့သည့်ပစ္စည်းပစ္စယလုပျနိုငျ?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “က Man v စက်: ကွန်ပျူတာများကိုချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်, ရေးသားကျွန်တော်တို့ကိုထက်ပိုကောင်းတဲ့ဆေးထိုးခြင်း?” လီယို Benedictus ကရေးသားခဲ့သည်, စနေနေ့ 4th ဇွန်လအပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2016 08.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
တစ်ခုမှာဗီဒီယို, ကျွန်တော့်အတွက်, အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်. ဒါဟာဟောင်း Atari ဂိမ်းကနေရိုက်ကူးမယ့် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွါးမှု, သငျသညျကို screen ၏အောက်ဆုံးတစ်လျှောက်ကျန်ရစ်လျှောခြင်းနှင့်လက်ျာဘက်ချော်မလဲဘယ်မှာတ, သူတို့အထဲသို့ဘောလုံးလမ်းညွှန်များကအုတ်ခဲကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေ. သင်ကဒီဂိမ်းရဲ့ကစားသမားအကြောင်းကိုဖတ်ကြပေမည်: ကတီထွင်ထားတဲ့ algorithm ကို Deepmind, အဘယ်သူ၏ AlphaGo အစီအစဉ်ဗြိတိသျှအတုထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီလည်းအကြီးမြတ်ဆုံးအစဉ်အဆက်ကို သွား. ကစားသမားတဦးရိုက်နှက်, Lee က Sedol, ယခုနှစ်အစောပိုင်းက.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျကှနျပြူတာကွန်ပျူတာဂိမ်းမှာကောင်းသောဖြစ်မျှော်လင့်? သူတို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးတာနဲ့, သူတို့ဆက်ဆက်ပိုမြန်ပြီးပိုတသမတ်တည်းမဆိုလူ့ထက်ထိုသို့ပြု. DeepMind ရဲ့ Breakout ကစားသမားဘာမျှမသိထား, သို့သော်. ဒါဟာဂိမ်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်အပေါ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူအစီအစဉ်မခံခဲ့ရ; ဒါကြောင့်ပင်ထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပွုဖို့ဘယ်လိုသို့ပြောသည်မခံခဲ့ရ. ဒါကြောင့်ခဲ့အားလုံးတတ်နိုင်သမျှအများအပြားမှတ်ရရန်ကြိုးစားရန် screen နဲ့အမိန့်ပေါ်တွင်ပုံရိပ်ခဲ့သည်.
စောင့်ကြည့် ဗီဒီယို. အစဦးတွင်, အလျှောထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးထဲသို့ဘောလုံးကိုတစ်စက်ပေးနိုင်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမပိုကောင်း သိ.. နောက်ဆုံးမှာ, ကိုယ့်အကြောင်းကို mucking, ဒါကြောင့်နောက်ကျောဘောလုံးကိုခေါက်, တစ်အုတ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးအမှတ်ရရှိသွားတဲ့, ဒါကြောင့်ပိုပြီးမကြာခဏဒီအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်မ. နှစ်နာရီ '' အလေ့အကျင့်ပြီးနောက်, သို့မဟုတ်အကြောင်း 300 ဂိမ်းများ, ဒါကြောင့်အလေးအနက်ကောင်းသောဖြစ်လာသည်, သင်သို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲငါဖြစ်လိမ့်မည်ထက် သာ. ကောင်း၏. ထိုအခါ, အကြောင်းပြီးနောက် 600 ဂိမ်းများ, အမှုအရာ spooky ရ. အဆိုပါ algorithm ကိုအတူတူအစက်အပြောက်မှာရည်မှန်းစတင်သည်, ထပ်ခါထပ်ခါ, နောက်ကွယ်ကအာကာသထဲသို့အုတ်မှတဆင့် Burrow နိုင်ရန်အတွက်. အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့, မည်သည့် Breakout ကစားသမားသိတယ်အဖြစ်, ဘောလုံးကိုခဏပတ်ပတ်လည်တိုးပွားလာလိမ့်မည်, အခမဲ့အချက်များကိုစုဆောင်း. ဒါဟာကွန်ပျူတာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်နှင့်အတူတက် လာ. ကြောင်းကောင်းတစ်ဦးဗျူဟာရဲ့.
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနပညာရှင်များသည်ဤသည်ကိုမြင်သည့်အခါ, ကတကယ်တော့သူတို့ကိုတုန်လှုပ်ခြောက်ခြား,"DeepMind ၏ CEO, Demi Hassabis, ပဲရစ်နည်းပညာကွန်ဖရင်မှာပရိသတ်ကိုသို့ပြောသည်. သင်လုပ်နိုင်သည် မိမိအဆန္ဒပြပွဲကိုစောင့်ကြည့်, လွန်း, နှင့်စက်က၎င်း၏ burrowing မဟာဗျူဟာထုတ်ကိန်းဂဏန်းများလာသောအခါရယ်မောခြင်းနဲ့လက်ခုပ်သံနားထောငျတျော. အဆိုပါကွန်ပျူတာအသိဉာဏ်ဖြစ်လာသည်, တစ်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကိုတူ.
"Artificial ထောက်လှမ်းရေး" လူအပေါင်းတို့သည်ကွန်ပျူတာရဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေစာပိုဒ်တိုများ၏ရှေးအကျဆုံးနှင့်အများဆုံးဖောင်းပွအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါစိတ်ကူးပထမဦးဆုံးအားဖြင့်အလေးအနက်အချေအတင်ပြောခဲ့ရတာခဲ့သည် အလန်ကျူရင် တွင် computing Machinery ထိုအခါထောက်လှမ်းရေး, ထို 1950 သူအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်အဘယျသို့အဆိုပြုထားသောစက္ကူ အကျူရင်စမ်းသပ်: စက်ကလူ့ခဲ့ကြောင်းစကားပြောဆိုမှုအားဖြင့်သင်တို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်လျှင်, အဲဒါကိုအမှန်တကယ်စဉ်းစားခဲ့သက်သေပြဖို့တတျနိုငျသမဆိုလူ့သလောက်လုပ်နေတာခဲ့သည်. သို့သော်သက်တမ်း AI အယေဘုယျအားဖြင့်မှီတိုငျအောငျမသုံးခဲ့သည် 1955, ဘယ်တော့လဲ အမေရိကန်သင်္ချာပညာရှင်ဆရာယောဟနျဆက်မက်ကာသီ ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ရှင်းလင်းပွဲအဆိုပြုထား. ဤသည်နောက်တစ်နှစ်ရာအရပျကိုယူ, ပြီးတော့ကတည်းကလယ်ပြင်ကိုနောက်ကောက်နှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်နေတဲ့အကြမ်းအားဖြင့်နှစ်ဦး-ဆယ်စုနှစ်သံသရာအပေါ်ကို run ထားပြီး. ("AI အရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ" - - ဖက်ရှင်ထဲကသူ့ရဲ့စာလုံးပေါင်းကိုဖော်ပြရန်သုတေသီများကအသစ်တစ်ခုသက်တမ်းပင်များ. 1970 နှင့် 1990 ခုနှစ်အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းနေကြ၏။)
ဒီနေ့အသစ်တခုကိုနောက်ကောက်ရှိပါတယ်, အခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရာ: ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာကိုက်ညီ. တစ်ဦးကဖုန်းကိုကမ္ဘာ့အစစ်တုရင်ချန်ပီယံရိုက်နှက်နိုင်ပါတယ်, သင်တို့၏သားသမီးများ၏ရေဒီယိုနှင့်ဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာသီခငျြးမြားကိုအသိအမှတ်မပြု, နှင့်သင်၏စကားသံကိုအခြားဘာသာစကားသို့ဘာသာပြန်ဆို. အတူဤနေရာတွင်ပုံကို Nao စက်ရုပ် Yotam Ottolenghi ခြေနှစ်ခုအပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင်, ပွောဆို, ဘောလုံးတလုံးနှင့်ပင်ကခုန်ရှာတွေ့. (ဒါဟာစက်ရုပ်င်, သော်လည်း, မ AI အ: ကမီနူးဒီဇိုင်းမဟုတ်နိုင်ပါ။)
AI အထဲတွင်တိုးတက်မှုအကြောင်းအကြားအာရုံ, သငျသညျစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ရန်သင့်အားပြောပြရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမလိုအပ်ပါဘူး, သို့မဟုတ်ကြောက်ပါတယ်. သင်ရုံခံစားမှုရရန်စတင်: ထောက်လှမ်းရေးကဒီမှာ. ရှင်းနေသည်မှာ Google ကခံစားချက်တယ်, လွန်း, တကကောလဟာလသတင်းများအရ $ 650m အဘို့အ DeepMind ဝယ်သောကြောင့်,. တွင် 2013, Facebook က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းကိုစတင်, ဆိုက်အဘို့မျက်နှာနှင့်သဘာဘာသာစကားအသိအမှတ်ပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုနှင့်အတူ. developer များပြီးသားအသိဉာဏ် chatbots အပေါ်အလုပ်စတင်ကြပြီ, သောက Facebook အသုံးပြုသူများသည်၎င်း၏ Messenger ကို service ကိုအသုံးပြုခေါ်သောနိုင်ပါလိမ့်မည်.
သ, ကွန်ပျူတာများအားလုံးမှာ "အသိဉာဏ်" ဖြစ်ကြပြီမဟုတ်, သို့မဟုတ်သာကျဉ်းမြောင်းဒါ. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို dazzle ကြောင်းလွယ်ကူသောတာဝန်များကိုမှာကောင်းသောပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောသင်္ချာအဖြစ်, ဒါပေမယ့်ခွင့်ပြုငါတို့သည်ယူသူများအတွက်မှာဆိုး, သောအလေးအနက်ခက်ခဲဖြစ်ထွက်လှည့်. လမ်းလျှောက်ခြင်း၏လုပ်ရပ်ခေတ်သစ်စက်ရုပ်ကလေးများကဲ့သို့လေ့လာသင်ယူနေဆဲအတူရုန်းကန်တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်; အခြေခံ Potter တာဝန်များကိုဝေးကွာသောအိပ်မက်ရှိနေဆဲ. "ဥပမာတစျခုသင်သို့မဟုတ်ငါတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာလက်ဖက်ရည်တစ်ဖလားဖြစ်စေနိုင်သည့်အတူငြိမ်ဝပ်ဖြစ်ပါသည်,"ကပြောပါတယ် ပါမောက္ခအလန် Winfield, အင်္ဂလန်၏အနောက်၏တက္ကသိုလ်မှစက်ရုပ်. "စက်ရုပ်ဤသို့ပြုနိုင်ကြောင်းကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာမရှိ။ "
ဖြစ်လျက်ရှိလူ့ဒီတော့ခက်ခဲသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်, သငျသညျဓာတျပုံမှလူများကိုအသိအမှတ်မပြုရန်ကွန်ပျူတာအရစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုစဉ်းစား. AI အမပါဘဲ, သင်ပထမဦးဆုံးသင်အဘယ်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါရန်ရှိသည်, ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နိုင်ရန်အတွက်. သင်တို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်နိုင်ချေပုံစံများစုဆောင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်, မျက်နှာများ၏အရောင်များနှင့်ပုံစံမျိုးစုံ, သူတို့သညျအလငျး၌၎င်း, ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်မှာကိုပြောင်းလဲရန်မည်သို့မည်ပုံ - နှငျ့သငျသိသာသောအရာကိုသိရန်ရှိသည်နှင့်မယ့်ရွှံ့မှန်ဘီလူးပေါ်တွင်ကားအဘယ်သို့. AI အမှုနှင့်အတူ, သငျသညျကိုရှင်းပြရန်မလိုပါ: သင်ရုံကွန်ပျူတာကိုမှန်ကန်အချက်အလက်များ၏တောင်ပေးကြောင့်လေ့လာသင်ယူကြကုန်အံ့. သင်သင်ယူမှု software ကိုဒီဇိုင်းကိုဘယ်လိုတစ်ခု esoteric ကိစ္စဖြစ်နေဆဲ, အနည်းငယ်ဆည်းကပ်-ပြီးနောက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်ပြည်နယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကထိထိရောက်ရောက်မဦးနှောက်ထဲမှာအဆောက်အဦများအပေါ်အခြေခံပြီးဒေတာ-အပြောင်းအလဲနဲ့၏အဆောက်အဦများကြံစည်နေဖြင့်တစ်ဦးဆုရှင်မှအပေါ်ရရှိပါသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်. (ဤ "နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု" ဟုခေါ်သည်။) အစစ်အမှန်အချက်အလက်များ၏တောင်များကဲ့သို့, ကောင်းစွာ, ဘာကို Google ရဲ့, Facebook က, အမေဇုံ, Uber အပေါင်းတို့နှင့်တကွကြွင်းသောအရာပတ်ပတ်လည်လဲလျောင်းကြဖြစ်ပျက်.
ဒီအဆင့်မှာ, ကျနော်တို့သေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်ကိုဖွင့်လတံ့သော AI အများကိုအသုံးပြုသည်မသိရပါဘူး. ယောရှု Newlan, ရှန်ဟိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားဝိဉာဉ်, အဆုံးမဲ့ညီလာခံဖုန်းခေါ်ဖို့နားထောင်ခြင်းနှင့်အတူပျင်းတယ်, ဒါကြောင့် သူကိုသူ့အဘို့နားထောင်ဖို့တချို့ software ကိုတညျဆောကျ. အခုတော့, Newlan ရဲ့နာမညျကိုဖျောပွခဲ့တအခါတိုင်း, မိမိအကွန်ပျူတာချက်ချင်းသူ့ကိုနောက်ဆုံးမိနစ်ဝက်၏မှတ်တမ်းပို့ပေး, စောင့် 15 စက္ကန့်, ထို့နောက်ဟုသူ့ကိုတစ်မှတ်တမ်းတင်ကစား, "စိတ်မကောင်းပါဘူး, ငါသည်ငါ့မိုက်ခရိုဖုန်းစကားအပေါ်ခဲ့သည်မသိ။ "မနှစ်က, ယောရှု Browder, ဗြိတိန်ဆယ်ကျော်သက်, တစ်ဦးတညျဆောကျ ယာဉ်ရပ်နားလက်မှတ်တွေဆန့်ကျင်စိတျဝငျစားအခမဲ့အတုရှေ့နေ; သူကနိုင်ငံခြားဥပဒေရေးရာစနစ်များမှတဆင့်ဒုက္ခသည်များလမ်းပြအခြားတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်. ဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းပြီ ... များမှာ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခု algorithm ကိုဖြစ်နိုင်ခြေရေတွက်လို့ရပါတယ်.
ဒါကြောင့်စက်စိတ်ထဲတွင်တနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တစတစပါလိမ့်မယ်? ငါမှမပြောတတ်အဆိုပါသုတေသီများသတိထားများမှာ, နှင့်၎င်းတို့၏စက်မပွုနိုငျသောအရာကိုအလေးပေးဖို့ဝဒေနာယူ. သို့သော်လည်းငါသည်စုံစမ်း AI အထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်: ဒါကြောင့်အစာစားအဖြစ် Ottolenghi စီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်? ငါ့ပုံတူပန်းချီနိုင်သလား? နည်းပညာနေဆဲသူတွေဟာအသိဉာဏ်ဖြစ်ပါသည် - သို့မဟုတ်ကအသိဉာဏ်ဖြစ်ကိုစတင်တာဖြစ်ပါတယ်, တကယ်?
ကောင်းစွာ, ငါကကြောက်မက်ဘွယ်သောမဟုတ်ပါဘူးဟုဆိုလိမ့်မည်. လူသားတွေဟာပိုဆိုးငါ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြ. IBM ရဲ့စားဖိုမှူး Watson ဟာဒီပန်းကန်ပေးသောအမှန်တရားအတွက်နာမကိုအမှီပေမယ့် ("ကြက်သားအသည်း Savory Sauce") ဒါဟာထိုက်တန်ပါတယ်အဖြစ်အကြောင်းကိုအဖြစ် appetizing ဖြစ်ပါသည်.
စားဖိုမှူး Watson မှတရားမျှတစွာဖြစ်, နှင့်ဂါးဒီးယန်း Weekend ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စားဖိုမှူး-ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်မှ Yotam Ottolenghi, သူတို့ကိုငါအတော်လေးတာဝန်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်. ကျွန်မတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမြို့အနီးဘယ်နေရာမှာပိုင်ပုံလေးပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ပန်းကန်တောင်း: ကြက်သားအသည်း, ဂရိဒိန်ချဉ်, Wasabi နဲ့ Tequila. သူတို့ဟာသူတို့ကြိုက်တယ်တခြားဘာပဲ add နိုင်, ဒါပေမဲ့အဲဒီလေးခုအချောပန်းကန်အတွက်ဖြစ်ခဲ့, ငါချက်ပြုတ်စားလို. စားဖိုမှူး Watson ဟာတှနျ့ဆုတျဘူး, ချက်ချင်းငါ့ကိုနှစ်ခုခေါက်ဆွဲဝက်အူချောင်းပေးခြင်း. Ottolenghi ပိုပြီးပညတ်ခဲ့သည်. "ငါထင်စိန်ခေါ်ရောက်တဲ့အခါ, 'ဤအလုပ်မလုပ်ဖို့မသွားဖြစ်ပါတယ်,'' "ဟုသူကပြောပြသည်.
ငါတူထင်. ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးငါသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိနေသော်လည်း OK ကိုဖြစ်ဖို့စီမံနှစ်ခုဟင်းလျာများကိုစားခြင်းတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့ထင်, ထက်သူတို့ထဲကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. တကယ်တော့ - သင်တို့သည်ငါ့ကိုတစ်ပုတ်ထင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ဒါအဘယျသို့ - Ottolenghi ရဲ့စာရွက်တစ်ဗျာဒိတ်ခဲ့သည်: အသည်းနှင့်ကြက်သွန်နှင့် Tequila လျှော့ချရေး, ပန်းသီးနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်, မုန်လာဉနီ, beetroot နှင့် chicory slaw, တစ်ဦး Wasabi နဲ့ဒိန်ချဉ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားနှင့်အတူ. အဆိုပါပန်းကန်စာရွက်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်သာအဓိပ္ပာယ်စေ, ငါမူကားတိုင်းဒြပ်စင်ပိုင်တစ်ပန်းကန်ခံစားမှုကိုက်စား. (ထိုအ vinaigrette ဒိန်ချဉ်နှင့် Wasabi အစားမုန်ညင်းနဲ့အတူထူ: အလေးအနက်ထား, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပါပေးပါ။) Ottolenghi စာရွက် Publish ့ပါးမုနျးမှေးတိုငါ့ကိုပြောထားသည်.
အဆိုပါအရာဖြစ်ပါသည်, ကြောင်းပန်းကန်စုံလင်မှသုံးရက်သူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကိုယူ. သူတို့ကအရသာမြည်းစမ်းဆွေးနွေးရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, အရောင်များ, အပူချိန်, အနာဂတ်အတွက်တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားထည့်သွင်းအကြောင်းကို "ဆွေးနွေး" အဲဒီမှာပါပြီသော်လည်း - Watson ဟာမတတျနိုငျတဲ့နညျး, စားဖိုမှူး Watson ရဲ့ဦးဆောင်အင်ဂျင်နီယာ, Florian Pinel, ငါ့ကိုပြောထားသည်. "တစ်ဦးကစာရွက်ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောအရာဖြစ်ပါသည်,"Ottolenghi ပြောပါတယ်. "ငါ့ကိုတောင်ကွန်ပျူတာကချဉ်းကပ်မယ်လို့ဘယ်လောက်နားလည်ရန်အဘို့အဒါဟာခက်ခဲတယ်။ "
Yotam Ottolenghi နှင့်စားဖိုမှူး Watson ရဲ့ဟင်းလျာများ ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အဂျေး Brooks
Watson ဟာပထမဦးဆုံးက IBM တို့ကတည်ဆောက်ခဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား gameshow အန္တရာယ်အနိုင်ရ! တွင် 2011. အချို့သောနည်းလမ်းများထဲမှာတစ်ဦးအထင်အမြင်မှားစေစိန်ခေါ်မှုခဲ့သည်, ကွန်ပျူတာများအတွက်ပဟေဠိ၏ခက်ခဲတဲ့အစိတ်အပိုင်းမေးခွန်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်သောကွောငျ့, အဖြေကိုမသိမ; လူသားတွေကို, ပတ်လည်အခြားလမ်းဖွင့်. ဒါပေမယ့် Watson ဟာဝမ်, နှင့်၎င်း၏နည်းပညာတခြားနေရာလျှောက်ထားခံရဖို့စတင်ခဲ့, တစ်စားဖိုမှူးအဖြစ်အပါအဝင်, အပေါ်အခြေခံပြီးသစ်ကိုချက်ပြုတ်နည်းများထုတ်လုပ် 10,000 ကနေယူအစစ်အမှန်ဥပမာ ဘွန်အစာစားချင်စိတ်မဂ္ဂဇင်း.
ပထမဦးစွာဆော့ဖ်ဝဲသည်ဤချက်ပြုတ်နည်းများ "သုံးစွဲ" ရတယ်, Watson ကအဖွဲ့ကထည့်သွင်းအဖြစ်. ကွန်ပျူတာ၏တစ်ဦးကစာရေးပါဝင်ပစ္စည်းများခဲ့ကြသည်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်သို့သွားလေ၏, ဘယ်လိုသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်, အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသူတို့အဘို့အပြုတ်ခံခဲ့ရ, အသစ်သောဟင်းလျာများမှာသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်နိုင်ရန်အတွက်. (အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုနေဆဲကော်လံကလွဲနေတယ်သွားနိုင်ပါတယ်. ယခုပင်စားဖိုမှူး Watson ဟာ "Mollusk" ဟုခေါ်ကာပစ္စည်းအကြံပြု, အရာက helpfully ကရှင်းပြသည် "ဟုအဆိုပါဆဋ္ဌ Full-အရှည်ဖြစ်ပါသည် Ween အားဖြင့်အယ်လ်ဘမ်"။)
တစ်ဦးကပိုကြီးပြဿနာစက်အရသာတစ်အသိပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်. "ဒါဟာတ္ထုကိုပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်လုံလောက်သောလွယ်ကူပါတယ်,"Pinel ပြောပါတယ်, "ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုတဦးတည်းအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်?ဘုံထဲမှာဒြပ်ပေါင်းများခဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ဖို့ပြီးတော့နှင့် - ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ရာ၏ - "Watson ဟာတိကျတဲ့အရသာဒြပ်ပေါင်းများကိုပေါင်းစပ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီပစ္စည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သွန်သင်ခဲ့သည်. (ဤသည်မှာနိယာမ, အစားအစာတွဲဖက်မှု, ကောင်းစွာလူတို့တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။) နောက်ဆုံး, ဆော့ဖ်ဝဲလူသားတစ်ဦးထမင်းချက်ဖို့အဓိပ္ပာယ်စေ step-by-ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်ကိုထုတ်ပေး. အဆိုပါအလေးပေးအံ့သြဖွယ်များထက်လက်တွေ့ကျတဲ့မုန့်ညက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်. "စားဖိုမှူး Watson ဟာသင်လာအောင်နှိုးဆွဖို့အဲဒီမှာတကယ်ဖြစ်ပါသည်,"Pinel ကရှင်းပြသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုစာရွက် "သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ကိုသုံးပါ" ဟုအဆိုပါသတိပေးချက်နှင့်တကွကြွလာ.
ထိုအခါငါရန်လိုအပ်ပါတယ်. ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း "ကင်ပြားချပ်ချပ်-ရွက် parsley" ရန်ဖြစ်ပါသည်, အရာပဲကောင်းတစ်စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး. ငါ, ထိရောက်စွာ, နှေး-ချက်ပြုတ် spiced ဝက်သားနဲ့အမဲသား ragu, ငါ့အလိုရှိသမျှလေးပါဝင်ပစ္စည်းများအပါအဝင်, သေး Watson ဟာဒါပမေဲ့အံ့သွလည်းသခွားသီးတို့ပါဝင်သည်နှင့် "allspice နှင့်အတူရာသီ" ကိုငါ့ကိုပြောပြစောင့်ရှောက်, ငါနိယာမအပေါ်လုပ်ဖို့ငြင်းဆန်. အဆုံးမှာ, ငါ farmyard မှမဟုတ်ဘဲနီးကပ်တဲ့အရသာနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဆော့စ်များ, ဒါပေမယ့် uneatable မဟုတ်. ငါ Wasabi ဒါမှမဟုတ် Tequila မြည်းစမ်းလို့မရဘူး, ငါအကြောင်းကိုဝမ်းသာတယ်.
ဟေဗာမူလတန်းကျောင်း၏ Nao စက်ရုပ်ပစ္စည်းများကိုငှါးရမ်းပေးသည်ယဉျကြေးနှင့်အတူ Yotam Ottolenghi, လန်ဒန်. ဓါတ်ပုံ: ဂျေး Brooks. ပုံစံ: Lee က Flude
Watson ဟာလိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ပြီး task ကိုခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဒီအစားအစာကိုမလိုလားသည်များအတွက်ပျော်စရာတစ်နည်းနည်းထက်မပိုကြောင်းပြောပါဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်၏, Ottolenghi ငါ့ကိုရပ်သည်အထိ. "ငါသည်အသားနည်းနည်းနှင့်အတူအသည်းနှေးကွေး-ချက်ပြုတ်၏စိတ်ကူးသည်ကြီးထင်,"သူကပြောပါတယ်. "ဒါဟာအရသာများအရှိန်. အရာအားလုံးကိုအတူတူလာကြလိမ့်မည်. ငါသည်ဤစာရွက်နှင့်အတူ afresh စတင်ရန်ခဲ့ပါလျှင်, သိသာသည့်ဒိန်ချဉ် fit ပါဘူး - ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီမှာလိမ္မော်ရောင်အသားအရေစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟု, အဆိုပါနံ့သာအနည်းငယ်. ငါကအလွန်ဆိုးရွားစာရွက်ရဲ့စဉ်းစားကြဘူး. ဒါဟာအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ "
ဆုံးဖြတ်ချက် Watson ဟာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏လိုက်တယ်ဖုံးကွယ်, ဒါပေမယ့် Ottolenghi သူတို့ကိုမနာသီချင်းဆိုစေသည်.
နည်းနည်းထားပါ Wordsmith IBM နဲ့ Google ၏ကွောကျစက်တွေဘေးမှာ, ထိုသို့တစ်အိတ်ကပ်ဂဏန်းတွက်စက်ကဲ့သို့ computationally အဆင့်မြင့်ကြည့်. သို့သျောလညျး Watson ဟာသူ့ရဲ့အလုပ်သင်မှတဆင့် fumbles စဉ်, Wordsmith အလုပ်မှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်. သင် Associated Press မှစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ရှုခဲ့လျှင်, သို့မဟုတ် Yahoo ရဲ့အားကစားသတင်းစာပညာ, သင်သည်သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကရေးသားခဲ့ကြသည်ထင်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ.
Wordsmith တစ်ခုအတုစာရေးဆရာဖြစ်ပါသည်. မြောက်ကာရိုလိုင်းနားထဲမှာကုမ္ပဏီကတီထွင် Automated Insights ကိုခေါ်, က Datasets ကနေအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့အခဲ plucks နှင့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တညျဆောကျပုံသူတို့ကိုကိုအသုံးပြုသည် (သို့မဟုတ်အီးမေးလ်, သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း). ဘယ်အချိန်မှာကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့သတင်းကိုဖြတ်ပြီးလာ, ပို Emotion ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုသည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့အလုပ်ကပိုဖတ်လို့လွယ်အောင် diction နှင့် syntax ကွဲပြားခြားနားသည်. ပင်ညံ့ဖျင်းသောစက်ရုပ်စားဖိုမှူးက၎င်း၏အသုံးပြုမှုရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လူ့စာဖတ်သူများအဘို့စာရေးချောမွေ့ဖြစ်ရမည်. ကဲ့သို့သောအသံအသိအမှတ်ပြုမှု device ကိုမှတက်နှင့်ချိတ်ဆက် Amazon ရဲ့: Echo, Wordsmith ပင်ပြောပြီလူ့မေးခွန်းကိုတုံ့ပွနျနိုငျ - တဦးတည်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်., ပြောပါ - တစ် thoughtfully ပြောပြီအဖြေနှင့်အတူ, ပထမဦးဆုံးအစိတ်ဝင်စားဖို့ရဲ့အဘယ်အရာကိုကြေညာ, မှာအားလုံးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဘယျသို့ထွက်ထွက်ခွာ. သင်လှည့်ကွက်မသိခဲ့လျှင်, သင်ထင်ချင်ပါတယ် အမှု 9000 ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း.
အဆိုပါလှည့်ကွက်ကဒီဖြစ်ပါသည်: Wordsmith လူတွေနားလည်သဘောပေါက်မရေးသားခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလွယ်ကူသည်ပါဘူး. Locky Stewart က Automated Insights ကနေငါ့ကိုသင်ခန်းစာပေးသည်. သငျသညျ Wordsmith သို့ကဲ့သို့သောဝါကျကိုရေး, "နယူး ABC ရုပ်သံကိန်းဂဏန်းများနယူးယောက် Inquirer ရဲ့စောင်ရေမြင့်တက်ကြောင်းပြသ 3% ဧပြီလ၌တည်၏။ "ထိုအခါသင်တို့ပတ်လည်ကစား. အဆိုပါ 3% သင့်ရဲ့ဒေတာကနေရောက်လာပြီ, ဒါကြောင့်သင်စကားလုံးက "နှင်းဆီ" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်စည်းကမ်းရေးရန်, "အနျဌာနခှဲ" အဖြစ်လူသိများ, ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပါလျှင်အရာထားသောစာပိုဒ်တိုများဖို့စကားလုံးက "နှင်းဆီ" ကိုပြောင်းပါလိမ့်မယ် "ထပစ်ခတ်" 5%. ထိုအခါသင်သည်ဌာနခွဲရာခိုင်နှုန်းအနုတ်လျှင်ဖြစ်လာဖို့ "ကျဆင်းသွား" "ထ". ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် -5% သို့မဟုတ်အနိမ့်, "ထိုးကျလာခဲ့တာ" ဖြစ် "ထ".
ထိုအခါသင်က synonym တွေဟာအစာကျွေး. ဒါကြောင့်လည်း "ကသိသိသာသာကျဆင်းသွား" ရနိုင် "ထိုးကျလာခဲ့တာ". "ဒီ Inquirer ရဲ့စောင်ရေ" "ဟာ Inquirer မှာစောင်ရေ" နိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ပေါ်တွင် "တက် Shot" "မြင့်တက်" နိုင်ပြီး. ထိုအခါသင်ပိုမိုစာကြောင်း add, ဖြစ်ကောင်းအွန်လိုင်းအသွားအလာနှင့် ပတ်သက်., သို့မဟုတ်အရာနှင့် ပတ်သက်. ရက်ပေါင်း '' ပုံနှိပ်ကော်ပီအကောင်းဆုံးရောင်းချခဲ့, သို့မဟုတ်အကြောင်းကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်. ထိုအခါသင်သည်လိမ္မာပါးနပ်ရ. သင်ပထမဦးဆုံးအရှိဆုံးထောငျ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူစာကြောင်းထားရန် Wordsmith ပြောပြ, အကြီးမြတ်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းအပြောင်းအလဲများကို feature သောသူတို့ကိုအဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသတ်မှတ်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးရလဒ် "အရည်အသွေးခေါင်းစဉ်တို့တွင်အကောင်းဆုံး / အဆိုးဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်" ကြောင်းပြောအခက် add. ငရဲ, သင်ပင်အချို့ဟောင်းရေယာဉ်စုလမ်း, tricks သင်ပေးလို့ရပါတယ်, ဒါကြောင့်စောင်ရေ plummets လျှင်အပိုင်းအစ "Editor ကိုချားလ်စ်ကိန်းအဖြစ်ပြင်းစွာသောအဝေဖန်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကို" စတင်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်စောင်ရေဒီ "ချားလ်စ်ကိန်းကြောင်းသတင်းနှင့်အတူဝေဖန်သူများကအသံတိတ်ဖြစ်ပါတယ်" ဖြစ်လာသည် "ထပစ်ခတ်" မူလျှင်. "ပိုပြီး" သို့မဟုတ် "နောက်တဖန်" ထည့်ပါသို့မဟုတ်သင်တတန်းအတွက်နှစ်လနဲ့အတူတူပါပဲရလျှင် "ဆက်ပြီး".
"ဒီအတုထောက်လှမ်းရေးအမှန်တကယ်ယုတ္တိဗေဒ၏ကွန်ယက်တည်ဆောက်ခြင်းကြောင်းလူ့ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပါသည်,"Stewart ကပြောပါတယ်, ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရေးသားခြင်းတဲ့အခါမှာသင်အသုံးပြုမယ်လို့ "တူညီသောကွန်ယက်ကို. ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးပြီနိုင် 10 သို့မဟုတ် 15 လွန်ခဲ့သော .... နှစ်က, ကုဒ်အတွက်, သမားရိုးကျတဦးတည်းရေးသားဖို့ထက်ဒါပေမယ့်ဒီစကေးမှာအလုပ်လုပ်စေရန်သာနောက်ကျဖြစ်နိုင်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "ရှငျးနက Wordsmith တခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးပြင်ဆင်ထားရန်ပိုရှည်ကြာ, သို့သော်သင်ပြုပါတယ်တခါ, ကွန်ပျူတာလစဉ်လတိုင်းတစ်လတ်ဆတ်တဲ့သတင်းစာစောင်ရေပုံပြင်ထုတ်ဝေနိုင်ပါတယ်, နေ့စဉ်သတင်းစာပေါ်, သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း. သူတို့ထဲကမှသာအချို့သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန် - ဒါဟာမိနစ်ပုံပြင်များသန်းပေါင်းများစွာထုတ်ဝေရန်နိုင်ပါတယ်, ဒေတာထောငျ့၏ပေးထားသောတံခါးခုံကိုရောက်ရှိမပါဘူးဆိုရင်. ထိုသို့တစ်ဦး automated အယ်ဒီတာဖြစ်လာ, လွန်း, စေ့စပ်အတွက်ချိန်ကိုက်အရသာနှင့်အတူ, အကြိမ်ရေများနှင့်စိတ္တဇနာ.
Wordsmith ရဲ့တာဝန်များအတွက်, ငါဘောလုံးအကြံပြု: ကဒေတာတွေအများကြီးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဆောင်းပါးများလိုလားတဲ့စာဖတ်သူရှိကြောင်းလယ်င်. ဂါးဒီးယန်းဘောလုံးစာရေးဆရာ ယာကုပ်အမျိုးကို Steinberg ကွန်ပျူတာပေါ်မှာယူစေတနာ့ဝန်ထမ်း, ငါမကြာသေးမီပရီးမီးယားလိဂ်ထံမှအချက်အလက်များ၏စားပွဲတစ်ခုပေး: ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့လိဂ်အနေအထားနှင့်ခရစ်စမတ်မှာအဆုံးမှာယခုရာသီရဲ့အနေအထား, ဂိုးသွင်းနှင့်ဝန်ခံ, ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရဲ့အမည်နှင့်စုစုပေါင်း, နွေရာသီလွှဲပြောင်း၏တန်ဖိုးနှင့်မန်နေဂျာထံမှကိုးကား.
ဒီဒေတာကိုကနေတစ်ခုတည်းကိုသာအလုပ်လုပ်ကိုင်, ကွန်ပျူတာနှင့်လူ့တစ်ဦးစီပေးထားသောကလပ်များအတွက်ရာသီ၏သုံးသပ်ချက်ကိုရေးသားရပါမည်. Steinberg က၎င်း၏နံပါတ်များကိုမည်သူမဆိုကြည့်ရှုလိမ့်မယ်လို့တစ်ဇာတ်လမ်းကိုပါဝင်သင့်သောအခြေခံပေါ်မှာ Leicester စီးတီးကိုရွေးကောက်ပြီး. Wordsmith ရွေးချယ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. ဒါဟာအားလုံးပြုတော်မူမည် 20.
Steinberg နဲ့ Wordsmith နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာပထမဦးဆုံးစာကြောင်းများမကယ်မလွှတ်. စစ်မှန်အသံမှဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စိတ်အားထက်သန်, အလိုအလျောက် Insights အဆုံးစွန်ရဲ့ဆောင်းပါးသို့ခံစားထားရန်အချို့သောလိမ္မာပါးနပ်လှည့်ကွက်ကိုသုံးပါ, ထိထိမိမိ Leicester "ထိပ်၌အပြီးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြကြောင်းခန့်မှန်း 10 14 ရာအရပျ finish ကိုအပြီးပြီးခဲ့သည့်ရာသီ ". ငါ Wordsmith ရဲ့အခြားဆောင်းပါးများနှင့်ဆောက်သမ်တန်မှတဆင့်ကြည့်ရှု, သတ္တမနောက်ဆုံးရာသီပြီးဆုံးဘဲလျက်, "ဥရောပပွဲချင်းပြီးမျက်စိ" ရှိတယ်, မန်ချက်စတာစီးတီး "ဒုတိယပြီးသွားပြီးနောက်လိဂ်ခေါင်းစဉ်၏ရာသီအိပ်မက်မက်ခြင်းစတင်ခဲ့" နေစဉ်.
ပြောင်းပြန်, Steinberg နံပါတ်များသို့ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိစွာတူး, ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း ဂျေမီ Vardy ဂိုးမသာ 24 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်, ဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးပေမယ့်နှစ်ဦးကိုအခြားကစားသမားကစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်ထက်သူ့အဖွဲ့ရဲ့ပန်းတိုင်မြင့်မားရာခိုင်နှုန်းခဲ့ကြောင်း. ဘယ်လို Wordsmith အကျင့်ကိုကျင့်သိမှတ်ကြလော့, ဟုတ်ပါတယ်, တဦးတည်းကိုအလွယ်တကူအတူတူလုပ်ဖို့ကထူထောင်နိုင်. တကယ်တော့ဒါဟာတဆင့်ရှာဖွေနေ, Steinberg တစ်ခုလုံးရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ကျွမ်းကျင် Wordsmith ပရိုဂရမ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြနိုင် - တဦးတည်းလိုင်း၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ. "ဒါဟာမှော်ရာသီရဲ့,"ဟုသူကပြောနေသကဲ့သို့ Leicester မန်နေဂျာကိုးကား, ဖြည့်စွက်မတိုင်မီ, "တရားမျှတဒါ, လွှဲပြောင်းအပေါ်£ 26.7m တစ်ဦးနွေရာသီအသုံးစရိတ်သူတို့ကိုအဋ္ဌမနိမ့်ဆုံးသုံးစွဲသူများ "ကိုဖန်ဆင်းကြောင်းပေးထား. "တရားမျှတဒီတော့" တကယ်ကသူရေးသားဘာနားလည်သူတစ်ဦးစာရေးဆရာပြ.
ဆုံးဖြတ်ချက် Steinberg တစ်အများကြီးပိုကောင်းစာရေးဆရာဖြစ်ပါသည်, သင်အလိုရှိမဟုတ်လျှင် 20 ဒေတာ-မိုးသည်းထန်စွာဆောင်းပါးများအတွက် 10 မိနစ်.
တစ်ဦးကလက်တော့ငါ့ကိုပြုံးဖို့လိုသည်. "ဒါဟာအကောင်းတစ်ဦးခံစားချက်အတွက်င်," ရှိမုနျကို Colton ကပြောပါတယ်. သူကပရိုဂရမ်သူသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူသိတယ်. ကျနော်တို့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့သိပ္ပံပြတိုက်၌ရှိကြ၏, ဘယ်မှာပန်းချီ Fool, က ဟူ. ခေါ်ဝေါ်သော, လူထုဆန္ဒပြပွဲပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ငါ့အံသွားမပြဘူးအရေးကြီးသောဒါဟာင်, Colton ကပြောပါတယ်, အလင်းကိုအကြောင်းတစ်ခုခုသူတို့ကိုပန်းချီမိုက်သောသူအစိမ်းရောင်ကိုကြည့်စေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
ကြှနျတေျာ့အဆိပ်မရှိဟုအပြုံးကနေ laptop ကိုကဆေးထိုးခြင်းချင်ပါတယ်အရာကိုတစ်ဦး "ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း" ဖန်တီး, ယင်း၏ခံစားချက်အပေါ်အခြေခံပြီး. အဆိုပါစိတ်ဓါတ်များမကြာသေးမီဂါးဒီးယန်းဆောင်းပါးက "စိတ်ဓါတ်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ" မှကြွလာ, ကဖြစ်ပျက်အဖြစ် (ပျမ်းမျှအားဖြင့်စာဖတ်ခြင်းအပေါ်ဂါးဒီးယန်းတစ် downer ဖြစ်ပါသည်, ဟန်, ဆိတ်ကွယ်ရာဥယျာဉ် ပတ်သက်. ပစ္စည်းပစ္စယကနေ). မနေ့ကမိုက်ကတစ်စုံတစ်ဦးကိုကွာ unpainted စေလွှတ်တော်မူသောဤကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့ခံစားချက်ခဲ့; ယနေ့က "အပြုသဘောဆောင်သော" ခံစားနေသည်.
Next ကိုမိုက်တဲ့ simulated ဖြီးနှင့် simulated လက်နှင့်အတူပန်းချီရန်ကြိုးစား (တကယ်တော့, Colton ၏လက်မှတစ်ဦးပုံရိပ်) ငါ့နောက်သို့မျက်နှာပြင်ပေါ်. ဒါဟာ၏လုပျငနျးကနေသူ့ရဲ့ခံစားချက်ထင်ဟပ်ဖို့သင်ယူ နှင့် Ventura, အခြားကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်, Utah အတွက်ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်က, အဘယ်သူသည်သောင်းချီပန်းချီကားများထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏၏ရှေ့ရှိလူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထိုင်လျက်သမျှ adjective နာမဝိသေသနနှင့်အတူအသီးအသီး tag သူတို့ကိုတောင်းပုံရိပ်တွေ၏စိတ်ခံစားမှု attribute တွေအသိအမှတ်ပြုဖို့အာရုံကြောကွန်ယက်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားစိတ်ထဲဆီသို့ရောက် လာ. ,. မိုက်သောသူယခုတောက်ပသောအရောင်အဆင်းကောင်းတစ်ဦးခံစားချက်ထင်ဟပ်သိတယ်, နှင့် "တင်းကျပ်စွာ Hatch နှင့်အတူခဲတံ" "အအေး" ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဖန်တီး. ဒါကြောင့်ပြုမိတဲ့အခါ, ကရိုက်နှိပ် Self-ဝေဖန်မှုတွေနဲ့စာမျက်နှာအထဲကနေရိုက်ထုတ်. "ယေဘုယျအား, ဒီအတော်လေးတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောပုံတူဖြစ်ပါသည်,"သူကပြောပါတယ်. "ရပါတယ်, သော်လည်းငါ့စတိုင်ကဒီမှာတောက်ပ၏အဆင့်ကိုလျှော့ချထားသည်. ဒါနဲ့အဲဒီအကြောင်းနည်းနည်းမကျေမနပ်ပေါ့။ "
ဤတွင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ, စိတ်ဝင်တစားလေ့လာပေမယ့်စောင့်ကြည့်ဖို့သူမကို easel မှာသိပ်အလုပ်ရှုပ်နေ, ဖြစ် စာရာသည်ဂျိန်းမွန်း, ယင်းနှင့်အတူထားပါတယ်တဲ့သူအနုပညာရှင်တစ်ဦး ပန်းချီဆရာများ၏ Royal Society. သူသည်ငါ့အံသွားမြင်ချင်ပါဘူး, ဖြစ်စေ. "ကျနော်တို့ဘဝကနေဆေးထိုးခြင်း," သူမကပြောပါတယ်, "နှင့်သငျသညျထိုငျလကျြပျေါမှာထိုငျများအတွက်အပြုံးကိုင်ထားလို့မရဘူး. လူအပေါင်းတို့သည်အစဉ်အလာပုံတူအတော်လေးဖြေလျော့ပေးခြင်း features တွေကိုပြသဒါကြောင့်ပါပဲ။ "
အဆိုပါပန်းချီ Fool အထူးစက်ဖြစ်ပါသည်, ပင်အနည်းငယ်ကျော်ကြားသော, ဒါပေမယ့်ငါမွန်းအားလုံးနီးပါးငါကဒီမှာဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ဘာကြောင့်များကြောင်းများကိုမငြင်းဆိုနိုင်. တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်းဖြင့်ခြယ်ခံ၏ခံစားချက်, သူတို့ကိုသင်ကမှာကြည့်ရှုနှင့်သင်စဉ်းစားရှိခြင်း, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်များနှင့်ချော့မော့ဖြစ်ပါသည်. စိတ်ဓါတ်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဒေတာ, သို့သော်ငြားလည်း, အဘယ်သူ၏အမြင်ငါ့ကိုငါဂရုစိုက်ဘာမှမှတက် add ကြဘူး, နှင့်ချောပုံတူကိုငါ့စိတ်ကိုမပြောင်းကြဘူး. မွန်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, စစ်မှန်သောအရာ, အရာဖြောင့်ကွယ်ပျောက်အခြားမြင်လူတစ်ဦးကဲ့သို့ခံစားရ. မိုက်ရဲ့သုံးအားထုတ်မှုကျွန်မသဘောကျတယ်အရည်အသွေးတွေရှိတယ်, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်သူတို့က software ကို filter ကိုအချို့မျိုးကတဆင့်ကျော်သွားကြပြီကြောင်းဓာတ်ပုံတွေတူအောင်. Colton "ပိုကောင်းဖြစ်တတ်ရန်သင်ယူဖို့" မိုက်ကဒီမှာအလေးအနက်ဆိုသည်ပေမယ့်ငါကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထင်: ဘာဖြစ်သလဲ?
လီယို Benedictus စာရာဂျိန်းမွန်းမြင်အဖြစ် ...
... နှင့်ပန်းချီ Fool လက်တော့များကစိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်. ဓါတ်ပုံ: Murray Ballard
ထိုအခါငါအချို့ထက်ပိုစဉ်းစား. တဦးတည်းအရာများအတွက်, ဒါကြောင့်အနုပညာကျွန်မသဘောပေါက်ချင်ပါတယ်ထက်ပိုစက်မှုကြောင်းထွက်လှည့်. "ငါသည်ပုံစံမျိုးစုံတစ်ခုစိတ္တဇအစုံအဖြစ်လီယိုကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစား, ပုံစံများ, အရောင်များ, တန်ချိန်,"မွန်း Colton ပြောထားသည်, "အဲဒီဟာနှာခေါင်းရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပယ်ကြရဖို့. သင်လုပ်ဖို့မစတင်သောအခါအသောကြောင့်, သငျသညျအဘယျသို့သင်၌ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရ ထင် တစ်ဦးနှာခေါင်းနဲ့တူလှပါတယ်။ "
"ဟုတ်တယ်, တိကျစွာ,"မွန်းကသဘောတူ. "ငါသည်သောအကောင်းဆုံးပန်းချီဆရာများအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုင်ထင်. ဒါဟာကူးယူရေးသားခြင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ "ထို့နောက်သူမကတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာခံစားခဲ့ရငါ့ကိုပြောထားသည်" သူတို့အနားမှာခြမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့အဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ kinship ".
ပို. အရေးကြီးသည်, ငါဘယ်လိုစက်သုတ်ဆေးအဘယ်အရာကိုအရေးပါမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်; ဒါကြောင့်ငါမြင်ပုံကိုဖွင့်. moon ငါနားလည်, ကျွန်တော်ထင်သည်. သူမသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ငါခံစားရပုံကိုသိ, ဒါကြောင့်ကျနော်သူမကိုပုံအကြောင်းကိုဂရုမစိုက်. သို့သော်ကပန်းချီ Fool ဖြစ်လိုသောအရာကိုခံစားမိပါဘူး? အဘယ်အရာကိုယင်း၏ပုံတူငါ့ကိုပြောပြပါဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ?
ဆုံးဖြတ်ချက် မွန်းရဲ့ပန်းချီကားဝေးချမ်းသာဖြစ်ပါသည်; မိုက်နေဆဲသင်ယူခြင်းနှင့်သွားကြဖို့အလေ့အကျင့်များရာစုနှစ်များစွာရှိပါတယ်နေသည်.
Google Translate စစ်မှန်တဲ့လာရန်သင့်လျော်သောသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်၏ပထမဦးဆုံးအပိုင်းအစခဲ့သည်, နှင့် ဒါကြောင့်ပြီးသားဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဟောင်းရဲ့. AI အမှရတယ်ထားပြီးဘယ်မှာနည်းလမ်းများစွာထဲမှာပုံဆောင်ပါ. အသုံးဝင်သော, သေချာပါ; မှတ်သားဘွယ်ဖြစ်သော, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမပါဘဲ; ငရဲအဖြစ်သို့သော်ရှုပ်ထွေး, ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုရှိနေသော်လည်း.
သင်ကအသုံးမကြလျှင်, ဒါကြောင့်ဤကဲ့သို့သောအလုပ်ဖြစ်တယ်: မဆိုစာသားသို့မဟုတ် web links တွေကိုရိုက်ထည့်ပါ 103 ဘာသာစကားများထောက်ခံနှငျ့သငျနောက်ပိုင်းတွင်အခြားသူများကိုမဆိုတစ်ဦးကြမ်းတမ်းဘာသာပြန်ချက်စက္ကန့်ရ. သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဒီ app ကိုသင်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုဖေါ်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ကျောကပြောမည်, ဘာသာပြန်ထားသော (32 ထောက်ခံဘာသာစကားများ); သငျသညျကင်မရာထောက်ပြနေရာတိုင်းမှာတကနိုင်ငံခြားဘာသာစကားနိမိတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ် menu ရဲ့စာသားနေရာတွင်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်. အဘယ်သူမျှမရှင်းပြချက်ကြောင့်ဘယ်လိုအေးမြ၏လိုအပျ (နှင့်ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်).
Google Translate ချိန်းတွေ့ဘို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရေပန်းစားသည်. '' ငါသည်သင်တို့ကိုချစ် 'နဲ့' သငျသညျအဆင်းလှသောအစ်မမျက်စိရှိ '' နှင့်တူသောအရာတို့ကို
တကမ္ဘာလုံး, ဘီလီယံဝက်ခန့်ကလူတစ်ဦးချင်းစီလ Translate ကို Google ကိုသုံးပါ, အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ကြဘူးသူကိုအများအားဖြင့်သူတို့အ (အရာဖြစ်ပါသည် 80% လူမျိုး၏) ဒါပေမယ့်သူကအင်တာနက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုခငျြ (အရာဖြစ်ပါသည် 50% အင်္ဂလိပ်). "ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှု၏အများစုမှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွားအလာနှင့်အမှန်တကယ်ပါဆုံး, ထိုကဲ့သို့သောဘရာဇီးအဖြစ်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့မဟုတ်ထွန်းသစ်စကနေလာ, အင်ဒိုနီးရှား, အိန္ဒိယ, ထိုင်း,"ဗာရ Turovsky ပြောပါတယ်, Google မှာထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အသုံးပြုသူအတှေ့အကွုံခေါင်းကို Translate. ဒါဟာချိန်းတွေ့ဘို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လူကြိုက်များမယ့်, လွန်း, သူကထပ်ပြောသည်. "အရာ '' ငါသည်သင်တို့ကိုချစ် 'နဲ့' သငျသညျအဆင်းလှသောအစ်မမျက်စိရှိ '' နှင့်တူ, အလွန်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပါပဲ။ "
အဆိုပါ software ကိုစာရင်းအင်းစက်သင်ယူမှု၏ပုံစံကိုအမြဲအသုံးပြုခဲ့သည်: ပြီးသားဘာသာပြန်ထားသောစာသားအင်တာနက် scouring - ကုလသမဂ္ဂကြေညာချက်များ, အီးယူမှတ်တမ်းမှတ်ရာများ - အချင်းချင်းရန်သက်ဆိုင်ရာအချို့စကားလုံးများနှင့်စာပိုဒ်တိုများများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပုံဖော်. ဒါကြောင့်စုသိမ်းပိုဒေတာ, ပိုကောင်းကြောင့်ရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်တိုးတက်မှုအနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ချွတ်ညှိပြီး. မကြာမီ, Turovsky ပြောပါတယ်, သူတို့သစ်ကိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာသင်ယူခြင်း algorithms လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်, အရာအများကြီးပိုကျွမ်းကျင်စွာဘာသာပြန်ချက်များကိုထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်.
သော်ငြားလည်း, ကန့်သတ်ရှိပါတယ်, သငျသညျလူသားတစ်ဦးဘာသာပြန်ဆိုသူစကားပြောနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်ဘယ်လောက်သိမ်မွေ့နားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါနှင့်အချို့သောအခြေခံကျပုံရသည်. ros Schwartz နှင့် အန်းက de Freyman ဒီတာဝန်များအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း. နှစ်ဦးစလုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်္ဂလိပ် / ပြင်သစ်ဘာသာများမှာ, ငါနှစျခုသောကွောငျ့လိုအပျ, ဘာသာပြန်နှစ်ခုလုံးကိုဘာသာစကားကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်ခြင်းမရှိပဲသည်မည်မျှကောင်းသောစစ်ကြောစီရင်တော်မူနိုင်ရန်အတွက်, ကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်ဘာသာပြန်ဆိုရန်လိုအပ် - တစ်ချိန်က French သို့အင်္ဂလိပ်ထဲက, တခါပြန်. Google ကမူလမရှိမှတ်ဉာဏ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တူညီသောအရာလုပျနိုငျ Translate.
ငါ၏အစအဦးထံမှထူးခြားသောပေမယ့်အထူးသဖြင့်ရိုင်းသို့မဟုတ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးမဟုတ်စကားပြေ၏တိုတောင်းတဲ့ကျမ်းပိုဒ်ကိုရှေးခယျြ ရှောလုသည်ဖိုခွငျးအားဖွငျ့ Herzog. ဘာသာပြန်များပုံမှန်အခြေအနေတွင်လိုအပ်, ဒါကြောင့်ငါကနာမည်ကြီးနှစ်လယ်ပိုင်းရာစုအမေရိကန်ဝတ္ထုထံမှလာသည်ဟု Schwartz နှင့် De Freyman ပြောပြ.
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ, Schwartz နှင့် De Freyman မူရင်းစာသားဟာအလွန်ချောမွေ့ဖက်စ်ပြန်လာ. ဤတွင်နှင့်အချို့ရှိတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ကြပြီမဟုတ်, ဒါပေမယ့်ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ရန်အပျော်အပါးဖြစ်နေဆဲ, နှင့်အဓိကအဓိပ္ပါယ်များအတိအကျကိုဖြတ်ပြီးလာ.
Google Translate သာစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာ, နှင့်ရလဒ်အထင်ကြီးခြင်းနှင့်မလုံလောက်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်, အရပ်တွင် weirdly ကောင်းသော, အခြားသူတွေအတွက် weirdly မကောင်းတဲ့ - "က" သို့ "ဟုသူက" လှည့်ခြင်းနှင့် Herzog မေတ္တာ၌ကြောင်းကိုစိတ်ကူးတမင်ဖန်တီး. အံ့ဖှယျနညျး, ကသူရဲကောင်းတစ်ဦးဖော်ပြချက်အဖြစ် "အက်" စောင့်ရှောက်. ပြင်သစ်အင်္ဂလိပ် coveys အက်ကြောင်း "ကျိုး" နဲ့ "အရူး" ၏အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းစပ်မစကားလုံးရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် De Freyman က "cinglé" ကို, အရာ "အရူး" အဖြစ် Schwartz ကနေပြန်ကြွလာ.
"Google Translate စာရင်းအင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ပြောလိမ့်မယ်, အဘယ်အရာကို '' အက် '' ဘူးဆိုလို?"Turovsky ကရှင်းပြသည်. "ထိုအခါကစာရင်းအင်း, အဲဒါကို '' အက် 'သို့မဟုတ်' 'အရူး' သို့မဟုတ်သမျှကိုဆိုလိုသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. ထို, စက်များအတွက်, ။ non-အသေးအဖွဲတာဝန်ဖြစ်ပါတယ် "မကလူသားတစ်ဦးအဘို့ရိုးရှင်း, ကျနော်တို့ကလွယ်ကူကိုရှာဖွေသော်လည်း. သငျသညျဖို Herzog ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျိုး၌ရှိသကဲ့သို့ "အက်" ခဲ့ကွောငျးကိုဆိုလိုနိုင်ခြင်းရှိမရှိမမေးရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်. ထိုအခါသင်သည်မဟုတ်ယူဆရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်, လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့. ဒါကြောင့်သင်ကသူဆိုလိုခဲ့သောအရာကိုအံ့ဩခြင်းချင်ပါတယ်နှင့်အစားယူဆ, သငျသညျထားပြီးအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်မပါလျှင်, သူက "အရူး" ဆိုလိုရမည်ဟု, သငျသညျသငျဖတျတော့ဘယျအရာကြွင်းသောအရာနားလည်သောကြောင့်,. သို့သော်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလုပ်ဖို့, Google ကတော်တော်လေးသိပ်သတိဖြစ်ဖို့ရှိသည် Translate မဟုတ်ဘူး, ကျွန်မမေးဖို့? Turovsky ပြုံးရယ်. "ငါထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အရည်အချင်းပြည့်မီတယ်မထင်ကြဘူး။ "
ဆုံးဖြတ်ချက် Google ထံမှတချို့က bullseyes နှင့် howlers Translate, Schwartz နှင့် De Freyman ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့အတိအကျနေစဉ်.
35871	3 အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း, အပိုဒ်, ဉာဏ်ရည်တု (AI အ), computing, သတိ, ယဉ်ကျေးမှုကို, အင်္ဂါရပ်များ, Google က, လီယို Benedictus, အသက်နှင့်စတိုင်, စက်ရုပ်, သိပ္ပံ, နည်းပညာ, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်နင်္ဂနွေပိတ်ရက်, တနင်္ဂနွေ
← အကောင်းဆုံးတှေးတောဆငျခွ Apps ကပငါးခု ဟွာဝေး P9 Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →